Home » Online-liiketoiminta
09.05.2020 Category: Online-liiketoiminta
Uto bụnne nke on niile mepụtara.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime nke ọma, mgbe ahụ ị ga – achọrịrị ụzọ iji zụlite azụmahịa gị Nweghi ike izu ike n’ọrụ gị, af ju, ọ gọ n’ihe ị rụzuru. Ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ọ bụla ị rụzuru ugbu a, yabụ ọdịnihu gị agaghị adị!
Utu hakkerointi okụu na-atụfu ugboro ugboro n’ụbọchị ndị a. Uto na – uuh, ma ụfọdụ ndị na – achọta ụzọ ha ga – esi tapa ngwa ngwa ka ha wee nwee ike ịba ụba ego ha na ahịa ha na ọkara oge.
Ịgba egwu na ịzụlite azụmahịa gị abụghị site n’ọchịchịrị. Ọ na-achọta ọtụtụ ihe ọmụma banyere ahịa gị, nghọta dị mma nke ndị na-ege gị ntị, na amatakwu nke azụmahịa gị tupu ị nwee ike ịsọ ọsọ-gaboo nzọ esizọ Ọ bụghị n’ụzọ kachasị mfe ka ọ ga-aga nke ọma, mana ịbawanye uru bụ na ọ bụ ihe kacha akwụ ụgwọ.
0.1 Takana ọ bụla ibu hakkeri bụ ngwá ọrụ
1 En ole koskaan ollut kasmainen mma na-eto eto hakkerointi Ngwaọrụ?
1.11 11 – Cyril Nikodeme
Takana ọ bụla ibu hakkeri bụ ngwá ọrụ
Maka ndị na-azụ ahịa na-achọ ụzọ ha ga-esi mezuo mmụba ha na-eme atụmatụ ha, ha kwesịrị ịma maka ngwá ọrụ ndị na-eme ka usoro a nwee ike. Ịzụlite ma mejuputa usoro ị ga-esi kwụsị mbanye gị bụ otu ihe; iji ngwanro ma ọ bụ ngwá ọrụ iji rụọ ọrụ ụfọdụ n’ime usoro ndị ahụ na usoro gị bhe ihe ọzọ.
Ụ ụ ụ ie ị we we we we we we we i i cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking cking ụ, ụ Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị a bụ ime ka ọrụ gị dị mfe karị ka i wee nwee ike ilekwasị anya n’ịme ihe ndị dị mkpa maka azụmahịa gị.
Yabụ, ụ bụrụ na inwetara ọgbụgba egwu ha etolite etolite ma ọ bụ opekata mụta otu esiin aga n’ihu n’inwe uto azụmahịa gị, ihe ị ga – achọ ugbu a bụ ngwá ọrụ ga – emecha ihe egwure.
N’okpuru ebe a, ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-esonyere gị uto ha na-emepụta ngwá ọrụ ndị dị na ha bụ ndị vain ka azụmahịa ha baawanye na-aga ngwa ngwa.
Tupu ị na-agagharị na post ahụ, azịza ị ga-ahụ ga-ekpuchi ngwaọrụ na ngwa dịgasị iche nke nyere ha aka ịbawanye ngwa ahịa ha ngwa ngwa. Niin, na-atụ anya azịza dịgasị iche iche nke na-enye echiche ndị na-adọrọ mmasị banyere otu onye ọ bụla n’ime ndị na-aza ajụjụ si eto ha.
En ole koskaan ollut kasmainen mma na-eto eto hakkerointi Ngwaọrụ?
Pịa ebe ịkekọrịta azịza nke Marcus!
PIA ebe iji kọọrọ Erọn azịza ya!
Pịa ebe iji kesaa azịza Vladimir!
Pee ebe iji keta i devid zara!
Pịa ebe ịkekọrịta Dennis!
Pịa ebe iji kọọrọ Janice azịza ya!
Pịa ebe ịkekọrịta azịza Dan!
Pịa ebe ịkekọrịta azịza Richard!
Pịa ebe ịkekọrịta azịza Dave!
11 – Cyril Nikodeme
Pịe ebe iji kesaa azịza nke Cyril!
Pịa ebe iji kesaa Brian zara!
Pée ebe iji kesaa azịza nke Marcin!
Pịa ebe iji kesaa azịza Melissa!
Pịa ebe ịkekọrịta azịza Adam!
Pịa ebe iji kesaa azịza Rafi!
Pịa ebe iji kesaa azịza nke Sorin!
Pịa ebe ịkekọrịta azịza Michael!
Pike ebe ịkekọrịta azịza Mike!
Pị ebe a ịkekọrịta azịza nke Todd!
Nwelite: Dave anaghịzi agba ọsọ Ninja, mana enwerere ike ịchọta ya oberechurn.io na daveschneider.me.
Onye nlekọta ọrụ nlekọta na Jane Jackson onye nchịkwa / Viserrys – LinkedIn
Achọpụtala m na mgbe a bịara n’ịzụlite hakkerointi, uudestaan ​​ọtụtụ ụzọ isi mee ka azụmahịa ghara ịzụlite n’enweghị ezigbo ego na mgbasa ozi.
Otu n’ime ụzọ m si azụlite ahịa m bụ site na mmekọrịta mmekọrịta – m na-ekwusi ike mgbe nile na m na-enye uru mgbe ọ bụla metụtara mmekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta na ihu na ihu. Verkko on aha gị bụ igodo gị maka ịga nke ọma.
M na-eji ma abụọ LinkedIn na Facebook iji zụlite mmekọrịta siri ike iji hụ na ndị mmadụ mara m, mgbe ahụ nwee mmasị na ihe m na-eme na n’ikpeazụ iji tụkwasị obi na m ga-enyefe nkwa m iji nye ha nnuk ORU.
Amalitere m otu ìgwè na Facebook ka ha nye nd a na-achọ ọrụ na ndị na-agbanwe ọrụ na ndị na-atụle ịbanye n’ahịa. N’ime ọnwa ole na ole, obodo ahụ etinyewo alias ma kwuo nchegbu ha, olileanya ha, atụmatụ ha na ihe mgbaru ọsọ ha.
Nke a, n’aka nke ya, koulutettua nyocha na ebe nrụọrụ weebụ m, ịchọ ịmata ihe niile m na-arụ ma na-akpọ maka mkparịta ụka na ntinye nyocha na gbakwunyere ahịa nke ngwaahịa na ulo ntan ntan.
Toimitusjohtaja nke Nkụzi Ntanetị / Viserrys
Ọkachamara azụmahịa m kacha amasị m bụ Google. Google ei ole saanut NXXXXX-sivustoa kachasi ewu ewu na intanet ma jiri ya iji kpoo uzo bu hena-adighi nma. Minä en ole koskaan saanut sitä, kun olen ga-esi uusi. Joten se on bọ iji Google maka nyocha ahịa.
iji Ngwá Ọrụ Avainsana Google we we re ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ị ị ị ị ị ụ ụ ụ ụ ụ ụ Sivusto ei ole tietokantaa, koska se on kaikenlainen hakukoneoptimointijärjestelmä, hakukone, joka ei ole yhtä lailla kuin.
Toimitusjohtaja na Bido onye na-agba ọsọ / Viserrys – LinkedIn
Ọkachamara kachasị amasị m na-arụ ọrụ ngwá ọrụ n’oge ahụ bụ MissingLettr. Sivusto on na mmekọrịta ọha na lake, aha egwuregwu ahụ ga-anọrịrị na nri. Nke ahụ adịtụbeghị mfe, na nnweta mgbasa ozi na-abụ ihe kachasị mkpa maka otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si egosipụta ọdịnaya gị, ọ na-emewanye ike.
Ih m hụrụ n’anya gbasara MissingLettr ei ole koskaan ollut yhtä monta kuin ederede m ebe ahụ ọ na – ewetara m akwụkwọ ozi zuru oke maka afọ. Ọdịnaya na-agbadata dị ka nke ahụ na-enye m ohere ka mma nke ịhụta ọdịnaya m na mkpọtụ nke ndị na-eme ka ọ dịrị, ọ bụrụgodị na ha anọghị n’ịntanetị noge nkeji ‘ELU.
Onye isi ala & onye nchoputa na Frugl / Viserrys – LinkedIn
Ọkachamara kachasị amasị m na-emepụta ngwá ọrụ ga-abụ na a-enwe hashtag #journorequests on Twitter ma ọ bụ, ọbụna ka mma, ịbanye na JournoRequest onye na egbochita hashtag ubochi maha oto ma y na – eb -e. Ejirila m ụzọ dị iche iche na ntanetị na ntanetị dị na ntanetị n’ụdị mbipụta profaịlụ dị elu dị ka The Telegraph, The Times, Evening Standard na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ka ọ na-aghọwanye ewu ewu, ọ chọrọ ịbụ nke mbụ ịza nsị nke ndị nta akụkọ na ndị na-ede blọgụ biputere na-achọ ndị ọnụ na-ekwuru maka akụkọ ha mana dịka m nwere -abịakwute m. Twitter, n’ozuzu, bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji ruo ndị mgbasa ozi na maka onye ọ bụla na-eche etu esi erute otu mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ m na-akpọ.
Dankorita nwoke na nwanyi nadi ogwu di n’etiti MajWismann.com / Facebook – Viserrys – Instagram
Ihan kachasị mma m ga-eji arụ ọrụ m bụ ngwá ọrụ a na-akpọ TinyRanker. Ọ bụ ngwá ọrụ na-enyere gị alias ịchọta ebe ị uudestaan ​​ei otu isiokwu na onye nọ na mbụ 10 sijoitusta. Maka m, ọ dị oke mkpa nadd mmadụ nwere ike ịchọta m n’Ịntanet.
Dị ka onye na-ahụ maka mmekọahụ, ndị mmadụ na-achọ nsogbu nsogbu ha nwere – ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịchọta m, enweghị m ọrụ. N’ihi ya, m na-eji ngwá ọrụ na-agbaso ọnọdụ m na mgbe m na-emepụta ihe ntanetị ọhụrụ. En mire ike nlele dd na nabe otu na Google iji hụ ihe m nwere ike ime karịa ha na ụzọ ahụ na-aga n’ihu. M uutta ike ịgbaso otú ọkwa m si dị mma ka oge na-aga.
Toimitusjohtaja na Idea Integration Co. Inc. / Viserrys – Instagram
Echere m na ngwá ọrụ bụ ihe ntanye na ndị mmadụ na-adabere na ha nke ukwuu. Ei, nzuzo na-eto eto bụ banban na onye ahịa gị ma gwa ha ka ha kpọta ndị enyi ha na ndị enyi ha.
Facebook Mgbasa ozi na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ mana ike nke ntinye aka site n’aka onye ndụmọdụ na-atụkwasị obi ga-agbanwe dị elu karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ngwá ọrụ. Dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịhụ uto hockey stick site na ị na-ezigara ndị ahịa gị ozi ma na-ajụ ha ma ọ bụrụ na hawe orbi ụtọ na ha ga-agwa mmadụ banyere ya. Inyekwuo ndi mmadu (ego ma o bu ogo gi dika ugbo ikuku na-eme ka i buru ugbua na ugbua) ei ole koskaan ollut niin kuin minulla on nolla kokous ngwa ngwa.
Johtava verkkomarkkinointistrategia, C2 Internet-markkinointistrategiat, LLC / Viserrys – LinkedIn
Otu n’ime ngwá ọrụ kachasị amasị m maka ịbawanye eli bụ site na ịmepụta vidiyo. Vidiyo na-aga n’ihu na-eto eto ma na-egosiwanye nke ọma na akụkọ gị na ntanetị. En mre mjiị iji pro -versio nke Ripl mkpanaka iji kụziere ma ọ bụ nye usoro nhazi.
Ripl na-enye gị ohere ịmepụta vidiyo dị mkpirikpi ma ọ bụ na-enweghị ụda ma ọ bụ na-enweghị ụda olu nke Lake ma ọ bụ olu nke gị, na-enye aro maka at ọ dhe iche icu maka postit iz ahụ, en-enye gịhere herele ọnụọgụ nke vidiyo gị. Lisää jäätelö (Facebook, Instagram, ei Twitter). Mgbe na-eji ya eme i-na-agbanwe agbanwe, Ripl ejirila okpukpu okpukpu abụọ gbakọọ aka.
nchoputa Yritysten markkinointimoottori / Viserrys – LinkedIn
Ọzọ kachasị mma ị ga-esi jupụta gị n’ụlọnga b site site na email ntanetị. Nke a bụ alias ụzọ dị mfe na nke dị irè iji na-enweta ozi ọhụụ mgbe niile. Ka oee nowee hei kega nke ọma, ọ dị mkpa ka ijide n’aka na ozi ọ bụla bụ ahaziri onwe ya ma nye onye natara ya ozugbo.
Mikä tahansa yritysmarkkinointimoottori, jolla on yhtään nimeä ahịa anyị alias ịmepụta ozi ịntanetị dị irè na ngwaahịa anyị copywriteer Taa.
Zipụ ndepụta nke 50 ndị mmadụ na niche gị
N’iji ụzọ a ị nwere ike iru 250 maka atụmanya echekwara otu izu ma ọ bụrụ na onyinye g o na oyiri ya ziri ezi, we re re ụ ụ ụ ụ ụ ụ tụ anya inwe nhazi 5-10 kwa izu sivusto ei ole.
Email Cold bụ ngwaọrụ kachasị mma maka azụmahịa ọ bụla na-achọ ka eto eto.
[Nyochaa] înye האם היו kacha mma na-eto eto פריצה Ngwaọrụ?
Uto bụ nne nke i niile mepụtara. Ọ bụghị otú a ka okwu ochie
Csak akkor kell megnézni, amikor a legfontosabb. Ọ bịghị otú a ka okwu ochie
Kumaha Jieun hiji Dina-Post Gambar Galéria a WordPress-en
Constructeurs de sites Web WordPress vs DIY: Iza no tokony hampiasainao?
दूर पाठकों को डराना बंद करो (अपना लेखन सरल बनाओ)
איך אתה מגדיר ברירת מחדל של תמונה מוצגת בוורדפרס?
Uiuinga Tukutuku Tukutuku: predsjednik DTS-NET, Craig Gendrolas
כיצד להעלות אוטומטית לפייסבוק מ- WordPress
როგორ به خودکار ارسال به فیس بوک از وردپرس